» वरिष्ठ अधिवक्ता महेश नेपालसँग पाँच सवाल : सरकारले सार्थक पहल गरेन भने न्यायपालिका ‘कोल्याप्स’ हुने स्थितिमा जान्छ
वरिष्ठ अधिवक्ता महेश नेपालसँग पाँच सवाल : सरकारले सार्थक पहल गरेन भने न्यायपालिका ‘कोल्याप्स’ हुने स्थितिमा जान्छ
नेपाल बार एसोसिएसनले सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चालेन्द्र शमशेर जबराविरुद्ध गरेको आन्दोलनलाई तपाईंले कसरी हेर्नुभएको छ ?
– न्यायालयप्रतिको जुन जनविश्वास थियो, न्यायालयले त्यो कायम गर्न सकेन। त्यसमा पात्रहरु को–को हुन् भन्ने कुराहरु पनि छन्। अहिले आएर चोलेन्द्र शमशेरले न्यायपालिकाको नेतृत्व लिन सकेनन् भन्ने मूल विषय हो।
एकजना चोलेन्द्र शमशेर हट्दैमा न्यायालयभित्रका तमाम विकृति र विसंगतिको अन्त्य गर्न सम्भव हुन्छ त ?
– मैले अघि नै भनेँ नि सर्वप्रथम अहिलेको समस्या समाधान गर्नुप¥यो, त्यो भनेको चोलेन्द्रबाट अब न्यायालय चल्न सक्दैन भन्ने हो। त्यसपछि एउटा समिति बनाएर न्यायालयको विकृति अन्त्य गर्नका लागि काम अगाडि बढाउनुपर्छ, त्यो समितिले हरिकृष्ण कार्कीको प्रतिवेदनलाई कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्नेबारे पनि छलफल गर्नुपर्छ।
बारको आन्दोलनमा भएका पछिल्ला गतिविधिहरु उग्र बन्दै गएको छ। त्यसबाट आन्दोलनका नाममा अराजक गतिविधिहरु बढ्ने सम्भावना पनि देखिन्छ, यसलाई चाहिँ कसरी हेर्नुहुन्छ ?
– आन्दोलनका नेतृत्वदायी भूमिकामा बसेका मानिसहरुले त्यो खालको गतिविधि गरेका छैनन्। तर, के भइदियो भने आन्दोलनमा दुवै खालका मानिसहरु छन्। आन्दोलनलाई डिफ्युज गर्न पनि मानिसहरु लागेका छन्, मण्डलामा आन्दोलनविरोधी केही व्यक्तिहरु देखिन थालेका छन्।
(न्युज कारखानाले गरेको कुराकानी)
१५ मंसिरबाट गोलाप्रथा लागु गर्ने सर्वोच्च अदालतको निर्णय